Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Great Britain dị njikere maka ọganihu njem nlegharị anya na 2022
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Ọpụpụ nbibi obodo nwere ike kwụọ ụgwọ mkpirisi ndị njem azụmahịa?
Imepe njem n'etiti UK, Europe na US ga-enye olile anya maka mgbake njem nlegharị anya - ọkachasị ka 2022 ga-ahụ nnukwu ohere zuru ụwa ọnụ maka UK.
Ebe, ndị na-ebubata ihe na ihe nkiri na UK ka atọrọ ịhụ mgbake na-adịgide adịgide na 2022, n'ihi mmasị inbound na ndị na-eme ezumike n'ime ụlọ iji nyochaa British Islands, na-ekpughe nyocha ewepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) na WTM London.
Ihe dị ka otu onye n'ime ndị Briten isii (16%) na-ekwu na ha na-eme atụmatụ ịdebanye aha ọnụnọ 2022 - n'agbanyeghị oke a na-achọ maka ezumike mba ofesi ka njem mba ofesi nwere ike ịgbake na 2022 - ebe ndị na-azụ ahịa njem mba ofesi na WTM London na-achọsi ike imechi azụmahịa maka ngwaahịa UK.
Nchoputa a, sitere na Akuko Industrylọ Ọrụ WTM, ga-abụ nkwalite nnabata maka ndị na-egosi UK na WTM London, bụ ndị ga-achọsi ike itinye ego na ewu ewu nke njem nlegharị anya ụlọ yana ọchịchọ a na-achọsi ike maka ndị ọbịa si mba ofesi ịlaghachi Britain.
Ọnụọgụ a sitere na ntuli aka abụọ nke WTM London nyere - nke mbụ jụrụ 1,000 ndị na-azụ ahịa wee chọpụta na 843 na-eme atụmatụ ime ezumike na 2022. Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ isii (17%) n'ime ndị a na-ekwu na ha ga-anọ.
Nnyocha nke abụọ gwara ndị ọkachamara azụmaahịa 676 wee chọpụta na ihe karịrị ọkara (58%) nwere mmasị ị nweta ngwaahịa UK na WTM London 2021, ma ọ bụrụ na ha aga. Nkwụsị nke ọnụ ọgụgụ gosiri na 38% nwere 'mmasị nke ukwuu' na 20% nwere 'mmasị'.
Mgbe a jụrụ ya maka ebe ma ọ bụ mpaghara ụfọdụ, London bụ nke kacha ewu ewu, mana ọtụtụ ndị ọzọ ka ndị na-azaghachi kwuru, gụnyere akụkụ ndị ọzọ nke England (dịka Devon, Cornwall, Kent na Manchester) gbakwunyere Scotland, Ireland na Wales.
Ọtụtụ ndị ngosi nwere mmasị na ngwaahịa dị na UK ga-anọ na ExCeL – London maka WTM London n'izu a (Monday 1 – Wenezdee 3 Nọvemba), gụnyere otu ndị njem nlegharị anya European Tour Operators Association; onye nchịkwa goro ụlọ ọrụ Abbey Travel; Kansụl District Dover, nke na-anọchite anya obodo White Cliffs; Ọkachamara njem nlegharị anya London na UK Golden Tours; na Merlin Attractions, nke nwere ọtụtụ saịtị na UK, dị ka Legoland Windsor, Alton Towers Resort, Warwick Castle, Madame Tussauds na London Eye.
Nnyocha nke Merlin na-egosi na ndị na-azụ ahịa na US na UK dị njikere ịlaghachi n'egwuregwu ogige ntụrụndụ "n'ìgwè ha" n'ihi ihe 'JOLA' - ọṅụ nke ile anya n'ihu.
Mgbe afọ ole na ole siri ike gasịrị, ezinụlọ na otu dị iche iche na-achọsiwanye ike ịde akwụkwọ n'ihu iji na-atụ anya ọpụpụ na ijikọ oge ọnụ, dịka nnukwu ihe nkiri si kwuo.
VisitBritain ebula amụma maka mgbake ngwa ngwa n'ihu, yana ọtụtụ ala ị ga-enweta mgbe afọ abụọ nke njem mbata amachibidoro nke ukwuu.
Ọ na-eme atụmatụ na mmefu ndị ọbịa si mba ofesi na UK na 2021 bụ naanị £ 5.3 ijeri, ma e jiri ya tụnyere £ 28.4 ijeri na 2019.
Ndị otu azụmaahịa na-abanye UKinbound anabatala ndị ozi n'oge ọrịa a iji gosipụta ọnọdụ ndị otu ya, ọtụtụ n'ime ha hụrụ na ego ha na-enweta na-agbada site na 90% ma ọ bụ karịa.
Agbanyeghị, ịmalitegharị njem n'etiti UK, Europe na US ga-enye olile anya maka mgbake njem nlegharị anya - ọkachasị ka 2022 ga-ahụ nnukwu ohere zuru ụwa ọnụ maka UK. Ọ ga-anabata ma mee mmemme Commonwealth Games na Birmingham, Festival UK 2022 na Queen's Platinum Jubilee.
Simon Press, WTM London Exhibition Director, kwuru, sị: "Nchọpụta na-egosi na a ga-enwe brisk trading maka UK ngosi na WTM afọ a - ha ga-achọsi ike iji uru nke ọhụrụ mmasị na n'ụlọ ezumike n'etiti British ahịa yana ime. Ọtụtụ n'ime nkwekọrịta ga-eso ndị na-azụ ahịa mba ụwa, bụ ndị na-achọsi ike ịbanye na ndị na-ebubata ya mgbe ezumike ezumike na UK gasịrị. "